ယ​နေ့ကျင်းပပြုလုပ်​သည့်​ သိန်း​ပေါင်း(၂ထောင်)​ကျော်​ အကုန်​အကျခံလှူ ဒါန်း​သော မြန်​မာ့ရိုးရာရှင်​ပြုနားသ အလှူ မင်္ဂလာ - Uptodate MM
ယ​နေ့ကျင်းပပြုလုပ်​သည့်​ သိန်း​ပေါင်း(၂ထောင်)​ကျော်​ အကုန်​အကျခံလှူ ဒါန်း​သော မြန်​မာ့ရိုးရာရှင်​ပြုနားသ အလှူ မင်္ဂလာ
By Uptodate MMPosted on May 11, 2019
သိန်းပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် ကုန်ကျခံပြီး အထမ်းသမားတွေနဲ့ ဆိုက်ကားသမားတွေ အပါအ၀င် ရဟန်းအပါး (၅၀၀) ရှင်ပြုရဟန်းခံပေးမယ့် ဇနီးမောင်နှံ
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်က အထမ်းသမားနဲ့ ကျိုက်ထိုမြို့ကဆိုက်ကားသမားတွေ ဆင်စီးပြီး ရှင်ရဟန်းပြုခွင့်ရအောင် သိန်း ၂၀၀၀ ကျော် အကုန်ကျခံပြီး အလှူကြီးပေးမယ့် အလှူရှင်ဇနီးမောင်နှံ။
“သိန်း ၂၀၀၀ ကျော် အကုန်အကျခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထူးထူးခြားခြား ပြုလုပ်မယ့် တတိယအကြိမ် ရှင်ရဟန်းအပါး ၅၀၀ အလှူတော်ပွဲမှာ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်က အထမ်းသမားနဲ့ ကျိုက်ထိုမြို့ကဆိုက်ကားသမားတွေ ဆင်စီးပြီး ရှင်ရဟန်းပြုခွင့်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်”
ယ​နေ့ကျင်းပပြုလုပ်​သည့်​ သိန်း​ပေါင်း(၂ထောင်)​ကျော်​ အကုန်​အကျခံလှူ ဒါန်း​သော မြန်​မာ့ရိုးရာရှင်​ပြုနားသ အလှူ မင်္ဂလာပွဲကြီးအား ကျိုက်​ထိုမြို့နယ်​၌ခမ်းနားထည်​ဝါစွာကျင်းပပြုလုပ်​​နေသည့်​မြင်​ကွင်းပုံရိပ်​များ….
ယင်းအလှူ ပွဲကြီးအား ပထမရိုးရိုး​လေးကုမ္မဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦး​နေထက်​သိန်းနိုင်​+​ဒေါ်​မော်​​မော်​လျှံ မိသားစုတို့မှလှူ ဒါန်းခြင်းဖြစ်​​ကြောင်းသိရသည်​။
ယ​နကေ့ငျြးပပွုလုပျ​သညျ့​ သိနျး​ပေါငျး(၂ထောငျ)​ကြျော​ အကုနျ​အကခြံလှူ ဒါနျး​သော မွနျ​မာ့ရိုးရာရှငျ​ပွုနားသ အလှူ မင်ျဂလာ
သိနျးပေါငျး ၂၀၀၀ ကြျော ကုနျကခြံပွီး အထမျးသမားတှနေဲ့ ဆိုကျကားသမားတှေ အပါအဝငျ ရဟနျးအပါး (၅၀၀) ရှငျပွုရဟနျးခံပေးမယျ့ ဇနီးမောငျနှံ
ကြိုကျထီးရိုးတောငျပျေါက အထမျးသမားနဲ့ ကြိုကျထိုမွို့ကဆိုကျကားသမားတှေ ဆငျစီးပွီး ရှငျရဟနျးပွုခှငျ့ရအောငျ သိနျး ၂၀၀၀ ကြျော အကုနျကခြံပွီး အလှူကွီးပေးမယျ့ အလှူရှငျဇနီးမောငျနှံ။
“သိနျး ၂၀၀၀ ကြျော အကုနျအကခြံပွီး မွနျမာနိုငျငံမှာ ထူးထူးခွားခွား ပွုလုပျမယျ့ တတိယအကွိမျ ရှငျရဟနျးအပါး ၅၀၀ အလှူတျောပှဲမှာ ကြိုကျထီးရိုးတောငျပျေါက အထမျးသမားနဲ့ ကြိုကျထိုမွို့ကဆိုကျကားသမားတှေ ဆငျစီးပွီး ရှငျရဟနျးပွုခှငျ့ရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ”
ယ​နကေ့ငျြးပပွုလုပျ​သညျ့​ သိနျး​ပေါငျး(၂ထောငျ)​ကြျော​ အကုနျ​အကခြံလှူ ဒါနျး​သော မွနျ​မာ့ရိုးရာရှငျ​ပွုနားသ အလှူ မင်ျဂလာပှဲကွီးအား ကြိုကျ​ထိုမွို့နယျ​၌ခမျးနားထညျ​ဝါစှာကငျြးပပွုလုပျ​​နသေညျ့​မွငျ​ကှငျးပုံရိပျ​မြား….
ယငျးအလှူ ပှဲကွီးအား ပထမရိုးရိုး​လေးကုမ်မဏီဥက်ကဋ်ဌ ဦး​နထေကျ​သိနျးနိုငျ​+​ဒျေါ​မျော​​မျော​လြှံ မိသားစုတို့မှလှူ ဒါနျးခွငျးဖွဈ​​ကွောငျးသိရသညျ​။
Posted in သတင်းTagged အလှူ
Previous post ကလေးလေး သနားလိုက်တာဗျာ.. အိမ်ထဲမှာဆော့နေတုန်း ခွေးဝင်ကိုက်သွားတာ
Next post ၁၄ ရက်ကြာမပုပ်မသိုးသည့် အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာဆရာတော်ကြီး ရုပ်ကလာပ်တော်ကိစ္စအငြင်းပွား